माननीयज्यूले बच्चा हेर्ने कि जनताको विकास ? | ebaglung.com
२०७५ मंसिर १२, बुधबार १९:२६	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ मंसिर १२ । सांसद सहित विभिन्न जनप्रतिनिधी र जनता बिच छलफल चलिरहेको थियो । बच्चाका जात त भई हाल्यो च्वाँच्वाँ रुन थाली हाले । कुरा गर्दा गर्दै ती बच्चालाई स्तपान गराउँदै भुलाउन थाल्दै थिईन प्रदेश ५ सांसद गीता थापा । सांसद थापा गुल्मीमा एक कार्यक्रममा सहभागि हुँदाको दृश्य थियो त्यो ।
जनताले राखेको कुरा पनि सुन्नु छ यता रोई रहेका आफ्नो नावालकलाई पनि भुलाउनु छ । काँखमा उनै नावालक बोकेर सदरमुकाम तम्घास हुँदै सिमीचौर खज्र्याङ्ग सम्म पुग्दै गर्दा निकै धपडी परेको देख्न सकिन्थ्यो सांसद थापालाई । माओवादी जनयुद्ध कालमा सेनाको निर्घात कुटाईबाट सदरमुकाम तम्घास बजार मै ढलेकी थापालाई ती बच्चा बोकेर जनताको घर घरमा पुग्नु त्यति ठुलो धपडी त नहुन सक्ला यद्येपी संगै हिडेका पुरुषहरुलाई अलि गाह्रो लाग्दथ्यो ।
रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्वर ११ को राङ्गवासलाई कृषि स्मार्ट गाउँ बनाउने योजनाको सम्भाब्यता अध्यान र जनताको मागबारे छलफल गर्न बसेकी सांसद थापले टिपोर्ट गरिरहेको कपी पटक पटक समातेर च्यात्न खोज्दै थिए उनका तिनै नावालकले । खज्र्याङ्ग खोल तटबन्ध नियन्त्रण योजना पनि उनको पहलमा परेको छ ।
त्यस खोला अनुगमन गर्न जाँदा पनि उनै बच्चा बोकेर वारी पारी गरिरहेकी थिईन उनि । संगै पुगेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) का जिल्ला सदस्य धर्म बिश्वकर्माले ठट्टा गर्दै भन्दै थिए –‘ माननिय ज्युले बच्चा हेर्ने कि जनताको बिकास ? ’ त्यस पछि हाँसो सुरु भयो । साथमा रहेका नेकपा प्रदेश कार्यदलका सदस्य बिरबहादुर कार्कीले भने बच्चा संगै जनताको बिकास हुर्काउने जिम्मा हो उहाँको भनेर भने ।
उनले थपे–‘ मैले पनि त घरमा बच्चा हेर्ने देखि घरको सबै काम गरेर हिडेको छु । ’ नेकपाका अर्का नेता अशोक थापा ( मुक्ति ) का अनुसार सांसद थापाको पहलमा रेसुङ्गा नगरपालिका १२ को छापा कुदाली स्यालटाकुरा हरिपोखरी दोमै मोटरबाटोका लागि ५० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारबाट विनियोजित भएको छ ।
वडा नम्वर ११ मा गडकुलो चिपटारी कुलो मर्मतका लागि १२ लाख रुपैयाँ परेको छ । वडा नम्वर १२ को हवाक्ने छहरा बसाी मोटरबाटो मर्मतका लागि १२ लाग रकम छुट्टाईएको छ । रेसुङ्गा नगर चक्रपथका लागि ४० लाख रुपैयाँ परेको छ । गुल्मीदरवार गाउँपालिका वडा नम्वर २ जुभुङ्गको अमिलावोट ताङलादी घुर्मि मोटरबाटोका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजित भएको छ ।
मजुवा स्थित बडिगाड खोला तटवन्ध नियन्त्रणका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्टाईएको छ । खज्र्याङ्ग खोल तटबन्धन नियन्त्रणका लागि ४० लाख रुपैयाँ परेको छ । राङ्गवास कृषि स्मार्ट गाउँ र कृषक समुहका लागि प्रारिम्भक अध्यान हुँर्दै छ र त्यस लगत्तै रकम विनियोजका लागि पहल हुने छ । त्यसको अध्यान अनुगमनका लागि सांसद थापा ती गाउँहरुमा बच्चा बोकेर आएकी हुन ।